Sida loo ogaado dhererka jeexista - Geofumadas
Ogaanshaha dhererka qalooca ah loo baahan yahay wax caadi ah, sida xarunta of jid weyn. Ka dib markii dagaal la Microstation V8 ayaan bilaabay in ay dib u eegaan sida AutoCAD iyo Microstation XM.
Iyadoo Microstation V8:
Maaha suurtagal marka la eego miiska guryaha, tan iyo markii la kiciyo amarka "xogta macluumaadka" aysan muuqan. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah qalabyada ugu caansan ee ku jira noocyada hore ee Microstation's XM.
Si kastaba ha ahaatee waxaa suurtagal ah in "masaafada qiyaas" Amarka iyo xulashada "weheliyaan element ah".
Waa in la soo bandhigay in miiska guriga, taas oo ay dhacdo AutoCAD 2009 waa in "view / guryaha" laakiin ma aha in ay adkayn element la ciyaaray iyo button mouse xaq waxaa laga codsadaa by xulashada "hantida".
Sida aad u aragto miiska, kuma dherer dhererka.
Markaa waxaad taabataa shayga, ka dibna amarka "liistada" ayaa lagu dabaqay, halkaasna waxaad haysataa.
ELLIPSE Layer: "Wadooyinka Wadooyinka"
Goob: Meele meherad
Midabka: 1 (casaan) Qalabka caynsan: "BYLAYER"
Gacal = d4
Xarunta: X = 483515.54, Y = 1553059.20, Z = 0.00
Xajmiga weyn: X = 75.28, Y = 27.06, Z = 0.00
Xooga yar: X = -27.06, Y = 75.28, Z = 0.00
Bilowga Barta: X = 483591.22, Y = 1553033.25, Z = 0.00
Dhamaadka Dhamaadka: X = 483590.83, Y = 1553086.26, Z = 0.00
Xoqo Xagal: 321d
Xagal xagal: 0d
Heerka Radiuska: 1.00
Isticmaalka Microstation XM:
Waxa uu u muuqdaa in la fahmo dhibaatada marka la dhigaayo Microstation 8.9 (XM), in amarka "guryaha element" jir ah oo miis fiicnaaday iyo dhererka qaanso waxaa ka mid ahaa.
Post Previous«Previous Tallaabooyinka 5 si loo helo fayras
Post Next Vuze, si ay u soo dejiso wax kasta ... si burcad-badeednimoNext »
3 Jawaab in "Sidee loo ogaadaa dhererka xayndaabka"
PSV86 isagu wuxuu leeyahay:
Aad u fiican, ugu mahad naqo suulka. Waan aqaanay liiska qaraarka laakiin ma aanan ku xisaabtamin.
Xaqiiqdii, waad fiicantahay inaad dirto amarradan kuwaas oo sida caadiga ah aan ... Salaan
In V8 waxaan u sameeyaa iyada oo loo marayo icon ee qalabkan: Cabbiraad. 4º Icon: Cabbiraad. Salaan